असफलतासँग कहिल्यै नतर्सनुहोस् । – The Word of God
असफलतासँग कहिल्यै नतर्सनुहोस् ।
एउटा गाउँका २ जना बच्चाहरू खेल्दै खेल्दै निकै परसम्म पुगेछन् । जाँदाजाँदै गाउँबाट निकै टाढा जंगल नजिकै एउटा इनार फेला परेछ, बच्चाहरू त्यहि इनारको वरिपरी खेल्न थालेछन् । उनीहरूको उमेर ७ वर्ष र १२ वर्ष रहेछ । खेल्दाखेल्दै ठुलोचाहिँ बच्चा अचानक इनारभित्र खसेछ । भित्रबाट उ जोडजोडले चिच्याउन थालेछ । ७ वर्षको सानो बच्चालाई के गर्ने के गर्ने भएछ । उसले इनारबाट केहि पर डोरीले बाँधेर राखिएको एउटा बाल्टिन देखेछ । त्यस बच्चाले दुगुरेर त्यो डोरीसहितको बाल्टिन ल्याएछ । उसले डोरीको टुप्पो समातेर बाल्टिन इनारमा फालेछ र ठुलो मेहनतले १२ वर्षे बालकलाई बाहिर तानेछ ।
बाहिर आएपछि उनीहरूले अंकमाल गरेछन् र हतारहतार गाउँमा गएर सबैलाई इतिवृत्तान्त सुनाएछन् । अचम्मको कुरा त के भने कसैले पनि उनीहरूको कुरा पत्याएनछन् । ७ वर्षको बालक जससँग एक बाल्टिन पानी निकाल्ने बल त छैन, उसले कसरि यति ठुलो मान्छेलाई तान्न सक्छ ? यो प्रश्नले गर्दा कसैले पनि उनीहरूको कुरा पत्याएनछन् । तर बालकहरूले धेरैपटक निश्चयताका साथ् यो कुरा भनिसकेपछि कुरा के रहेछ त भनेर गाउँलेहरूले सानोचाहिँ बालकलाई सोधेछन्; त्यसो भए ल भन् तैंले कसरि यति ठुलो काम गर्न सकिस् ? बालकले जवाफ दिएछ: “दाइ इनारमा परेपछि सहायता गर्ने कोहि मान्छे छ कि भनेर मैले चारैतिर हेरें; तर कोहि थिएन, त्यसपछी मैले नजिकैको डोरीसहितको बाल्टिन उठाएर उहाँलाई निकाल्न सकें किनकि त्यहाँ “तैंले यति ठुलो मान्छेलाई तान्न सक्दैनस्” भनेर मलाई भन्ने कोहि पनि थिएन ।”
धेरैपटक हामी हाम्रो क्षमता निर्धारण गर्ने अधिकार मानिसहरूका अनेक आवाजलाई सुम्पन्छौँ । “तैंले गर्न सक्दैनस्” भन्ने आवाज हाम्रो वरिपरी चारैतिर हरघडी गुन्जिराखेको हुन्छ ।
परमेश्वर भन्नुहुन्छ: तँ गर्न सक्छस्; सैतानले भन्छ: तैंले केहि जानेको छैनस्, पढेको पनि छैनस्, बोल्न पनि जान्दैनस्, त्यसैले तैंले केहि गर्न सक्दैनस् । दु:खको कुरा धेरैपटक हामीले अन्जानमै आफुलाई परमेश्वरको नभएर सैतानको आवाज सुन्ने बनाइराखेका हुन्छौं; अनि पुर्पुरोमा हात राख्दै भन्छौं: म केहि गर्न सक्दिन ।
परमेश्वरले हामीमा राखिदिनुभएको अपार सम्भावनाहरू बारे हामी बेखबर रहन्छौं । उहाँ त त्यहि परमेश्वर हुनुहुन्छ; जसले गोठालो दाउदलाई राजा चुन्नुभएको थियो । दास दानियललाई बडाहाकिम बनाउनुभएको थियो । निश्चय नै उहाँले हामी हरेकबाट महान ठानिएका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ । दुनिंयाले तँ यो कामको लागि योग्य छैनस् भनेको भए पनि वा उक्त काममा हजारौं पटक असफलता हात लागे तापनि हामीले हरेस खानुहुँदैन ।
एउटा मानिस जसलाई कुनै प्रतिभा नभएको व्यक्ति भनेर थुप्रै पत्रिकाका सम्पादकहरूले आफुसँग काम गराउन अस्वीकार गरेथे; उही व्यक्ति एकदिन संसारकै चर्चित एनिमेटर बन्न सफल भए । बिश्वबिख्यात डिस्नी कम्पनीका मालिक, मिक्की माउस लगायतका अरु थुप्रै चर्चित कार्टुनहरूका सिर्जना गर्ने व्यक्ति बन्न पुगे । उनको नाम हो: वाल्ट डिस्नी ।
एउटा मानिस जसले दस हजार पटक भन्दा बढी असफल हुँदा पनि हिम्मत हारेनन् अनि अन्तत: बिद्धुतीय चिम बनाई त्यसबाट प्रकाश उत्पादन गराएरै छाडे । उनको नाम हो: थोमस एडिसन ।
एउटा मानिस जसले २१ बर्षकै उमेरमा व्यापारमा ठुलो घाटा खाए, र पूर्णत: असफल भए । २६ बर्षको उमेरमा उनकी प्रेमिका मरिन् र २७ बर्षमा उनको नर्भस ब्रेकडाउन भयो । त्यसपछि उनले लडेका ८ वटा चुनावमा उनी हारे तर नबौं पटकको चुनावमार्फत् उनी अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति बन्न सफल भए । उनको नाम हो: अब्राहाम लिंकन ।
अर्को एउटा मानिस जो अहिले यो पढ्दैछ; आफैलाई हेरेर कहिलेकाहीं उ असन्तुष्ट हुन्छ, यस्तो सोच्छ कि मैले केहि गर्न सक्दिन, जति गर्न खोजेपनि केहि काम बन्दैन, सधैं असफलता मात्रै हात लाग्छ ।
पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ: “आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी, र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ ।” हितोपदेश ३:६
“हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु ! त्‍यो अब हुन आउँछ । के तिमीहरू त्‍यो देख्‍दैनौ ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रूखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु ।” यशैया ४३:१९
परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा उदेकका कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ । यो हुँदैन, म सक्दिन, म जान्दिन, म कमजोर छु, म गरिव छु, मैले धेरै पढेको छैन भनेर उहाँको कामलाई नछेक्नुहोस् ।